Veloma 'tsy manam-petra' Eropa? Mametraka ny fizahana sisin-tany any amin'ny sisintany Suède i Danemark
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Veloma 'tsy manam-petra' Eropa? Mametraka ny fizahana sisintany ao amin'ny sisintany Suède i Danemark
Veloma 'tsy manam-petra' Eropa? Mametraka ny fizahana sisintany ao amin'ny sisintany Suède i Danemark
Oktobra 11, 2019
Nanambara ny minisitry ny fitsarana any Danemark Nick Haekkerup androany tamin'ny Copenhagen ny firenena dia hanangana fizahana sisintany tsy maharitra ao amin'ny sisintany miaraka aminy Soeda manomboka amin'ny volana manaraka.
Ity hetsika ity dia nitranga taorian'ny niampangana an'i Suède roa ho voarohirohy tamin'ny fipoahana tany ivelan'ny maso ivo hetra tamin'ny volana aogositra
Ny praiminisitra Mette Frederiksen dia nilaza tamin'izany fotoana izany fa ny governemanta dia mandinika ny fanamafisana ny fanaraha-maso eo amin'ny sisintaniny miaraka amin'i Sweden.
Denmark dia mifandray amin'i Suède amin'ny alàlan'ny tetezana Oresund manerana ny halavirana 10 kilometatra. Olom-pirenena an'arivony avy amin'ny firenena roa no mandeha miampita ny sisin-tany isan'andro amin'ny lamasinina sy fiara. Ny firenena roa tonta dia mpikambana ao amin'ny Vondrona eropeana.
Herinandro fitsangatsanganana any London: Ilay zaza vaovao mifangaro ary maro hafa
Seranam-piaramanidina Lufthansa Group: mpandeha 14 tapitrisa amin'ny volana septambra 2019
1 ora lasa izay
Mbola ambany ny fifamoivoizana ataon'ny mpandeha ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt amin'ny volana aprily 2021
Ny fihenan'ny vidin'ny fitsapana PCR dia misy fiantraikany ratsy amin'ny fanarenana ny dia iraisam-pirenena
Lufthansa Group Airlines dia manitatra ny safidy hanovana famandrihana tsy misy sarany